Funda konke okuhlobene nezinga lokuvuselela lamadivayisi akho e-Apple | Ngivela ku-mac
UManuel Alonso | | Izifundiswa
Enye yezinto esizinaka kakhulu lapho sithenga umshini amandla okugcina nokushesha kwawo lapho usebenza nezinhlelo ezimbalwa ngesikhathi esisodwa. Ikakhulukazi ku-Mac, lokho kuyinto ebaluleke kakhulu. Kuyiqiniso ukuthi nge-chip entsha ye-M1 ukuvela kwalawa makhompyutha kube yinto embi kakhulu. Enye into okukhulunywa ngayo kakhulu ngenxa yala maMacs amasha yikhono lokuvuselela isikrini sekhompyutha kanye nomthamo omkhulu abanawo. Izinga eliphakeme lingcono? Kodwa lithini izinga lokuqabuleka? Ingabe kuzoba usizo kimi?. Yilokho esizozama ukukuchaza kulesi sihloko.
1 Lithini izinga lokuvuselela isikrini?
1.1 Izinzuzo kanye nokubi kwezinga lokuvuselela
2 Qaphela lokhu. Izinga lokuvuselela alifani nezinga lesampula.
3 Izinga lokuvuselela kumadivayisi we-Apple
3.1 I-iPhone 12 ne-13
3.2 Amakhompyutha we-Mac
3.3 I-Apple Watch
Lithini izinga lokuvuselela isikrini?
Uma sikhuluma ngezinga lokuvuselela, empeleni sibhekisela ku- isivinini okubuyekezwa ngaso okuqukethwe esibukweni. Njengayo yonke into engalinganiswa, sinalesi sikhathi esisihlaziya ngezithombe ngomzuzwana. Ngale ndlela, iyunithi yokulinganisa esetshenziselwa ukunquma izinga lokuvuselela lephaneli i-Hertz (Hz).
Sesingavele siphendule omunye wemibuzo esizibuze yona ekuqaleni kwalesi sihloko, ngenhla kancane kwale migqa. Uma izinga lokuqabuleka kwesikrini liphezulu, kulapho ukugcwala kwamanzi kuyanda okuvezwa ngazo izithombe ezivela kuyo. Ngokuyisisekelo ngoba ngaleso sikhathi esidlula phakathi kwesithombe ngasinye kuleso sikhala sesikhathi, sizoba nesibuyekezo esikhulu. Manje, akulona lonke igolide elibenyezelayo. Kumele kucatshangelwe ukuthi kunochungechunge lwezinkinga ezihambisanayo futhi esizokhuluma ngazo manje. Kodwa njengoba kuvame ukushiwo ukuthi isithombe sinenani lamagama ayinkulungwane, lapha sikushiyela ividiyo lapho le ncazelo iboniswa khona.
Njengamanje omabonakude abaningi, amafoni, amakhompyutha, namadivayisi wesikrini, tBasebenza ngesilinganiso sokuvuselela esingu-60 Hz. Nakuba kuyiqiniso ukuthi akhona amakhompyutha lapho la mazinga afinyelela khona izibalo ezididayo. Yebo, siphinde sibe nama-smartphones afinyelela izibalo ezifika ku-144 Hz. Kuyinto enhle ngoba ukufinyelela izinga eliphezulu lokuvuselela, njengoba sesibonile kakade, kusho izithombe ezibushelelezi futhi ngaleyo ndlela akugcini nje ukubukeka kangcono kodwa futhi kunciphisa ukukhathala okubukwayo kakhulu. Lokho kubalulekile, emhlabeni lapho ubuchwepheshe nezibonisi kubaluleke kakhulu futhi cishe kubalulekile.
Yize bekuhlale kushiwo ukuthi lawa mazinga aphezulu okuvuselela afakiwe kumadivayisi Wabadlali, kufanele kukhunjulwe ukuthi i-niche yemakethe isivele yandile. eminyakeni embalwa edlule futhi amafoni amaningi namathebulethi asevele efakiwe. Sinesibonelo se-iPad Pro kanye ne-iPhone 12 ne-13, isibonelo.
Izinzuzo kanye nokubi kwezinga lokuvuselela
Kubuhlungu kodwa akuzona zonke izinzuzo ngamanani okuvuselela aphezulu. Kufanele uhlole yonke into iyonke futhi manje njengoba sesiyazi ukuthi isho ukuthini, ake sibone ukuthi kwenzekani kuyo.
Uketshezi kanye nokushelela. Lokhu kucacile. Lapho izinga lokuvuselela liphezulu lesikrini sedivayisi, siba nokushelela okukhulu nokushelela kwezithombe. Lokhu kusho futhi ukuthi izinguquko zohlelo lokusebenza ziyashintsha, lapho siskrola ku-iPhone noma sihambisa igundane ngokushesha kuwebhusayithi eku-Mac, noma sisuka kwesinye isicelo siye kwesinye, kuzokwenziwa kahle kakhulu ngakho-ke kuzoba nobungane. .
Izinga lokuvuselela eliphakeme lisho i-eyestrain encane futhi ngakho-ke singajabulela kangcono ukuzizwisa ngezikrini.
Ububi obukhulu bokuba nezinga eliphezulu lokuvuselela ngokungangabazeki a izindleko eziphezulu zamandla kuleyo divayisi. Lokhu kusho ukuthi sinokuzimela okuncane ngakho-ke, endabeni yama-iPhones, ifakwe kuphela kumamodeli we-Pro anebhethri elikhudlwana.
Akukhona konke okuqukethwe okutholakala ngezinga lokuvuselela elingu-120Hz. Lokhu kufana nokuba nomabonakude okwazi ukudlala okuqukethwe kwe-8K. Kulungile, kodwa uma okuqukethwe ngokwako kungekho ku-8K, ngakho-ke asinandaba nomthamo wethelevishini.
Uma isikrini sikhulu futhi izinga lokuvuselela likhuphuka, kubiza kakhulu idivayisi.
Qaphela lokhu. Izinga lokuvuselela alifani nezinga lesampula.
Ezinyangeni ezisanda kwedlula, abanye abakhiqizi abethule amadivaysi isikrini sabo esidlula umgoqo we-60 Hz wokuqabuleka kwesikrini, baphinde babhekisa ku- isilinganiso sesampula yephaneli. Sibhekisela esimweni samanye amadivayisi we-Samsung. Kukhangiswa ukuthi isikrini sayo sivuselelwa ku-120 Hz futhi sinesilinganiso sesampula esingu-240 Hz.
Izinga lesampula, nalo likalwa nge-Hertz, libhekisela enanini lezikhathi isikrini esilandelela okokufaka kokuthinta. Ngakho, ukuphakama kwevelu yefrikhwensi, i-touch latency ephansi noma i-lag yokufaka, kanye nokuzwakala okukhulu kokumanzi nokukhanya kokunyakaza. Kodwa Akuhlangene nokuthi sikhuluma ngobani lapha futhi ningadideki. Ngokunengqondo, ukuphakama kokubili kwamazinga, kungcono.
Izinga lokuvuselela kumadivayisi we-Apple
Uma sesiphenduke "ochwepheshe" ngezinga lokuvuselela isikrini sedivayisi futhi sazi nokuthi singasehlukanisa kanjani nemvamisa yesampula, ake sibone i-Apple imaphi amadivaysi afinyelela amanani aphezulu nokuthi abaluleke kangakanani.
I-iPhone 12 ne-13
Kokubili i-iPhone 12 ne-13 inezikrini ezinezinga lokuvuselela elifika ku-120 Hz. Kodwa qaphela, akuwona wonke amamodeli we-iPhone anezinga elifanayo. Kulokhu, izinga eliphezulu kakhulu lifika kumamodeli aphezulu kakhulu. Sizoba ne-120HZ kumamodeli we-Pro. Ngokuyisisekelo ngenkinga yebhethri kanye nobude besikhathi sokusetshenziswa kwetheminali. Ukube bebebeke isikrini saleyo khwalithi ku-iPhone mini, kungenzeka ukuthi ngesigamu sosuku kuzodingeka sibheke ipulaki.
I-Podemos fingqa izinga lokuvuselela i-iPhone kanje:
iI-Phone 13 Pro ne-iPhone 13 Pro Max Bafaka iSuper Retina XDR yakamuva ye-Apple ene-ProMotion, enesilinganiso sokuvuselela esishintshashintshayo sisuka ku-10Hz siye ku-120Hz. I-iPhone 13 ne-iPhone 13 Mini zisebenzisa i-60Hz.
Okufanayo kuya kumamodeli we-iPhone 12
Kungenzeka kanjani kube kuncane, uma i-iPhone ine-ProMotion, i-Macs, futhi. Kodwa ungacabangi ukuthi wonke ama-Mac. Ungacabangi ukuthi ngenxa yokuthi angamakhompyutha kufanele abe nezikrini ezinezilinganiso zokuvuselela eziphezulu. Uyazi kakade ukuthi izinga eliphezulu nesikrini esikhulu, kuyabiza kakhulu. Empeleni Ambalwa amamodeli anezibonisi ezingu-120 Hz ezihlotshaniswa nawo.
Enye yezinto ezintsha ezinhle ze- Izinzuzo ze-MacBook ezintsha ezingama-intshi angu-14 nangu-16 intshi yikho kanye lokhu. Isibonisi se-mini-LED sisekela izinga lokuvuselela elingafika ku-120 Hz ngenxa ye-ProMotion. I-ProMotion okumele icushwe isofthiwe. Ngakho-ke usuvele unomuzwa wokuthi singashintsha lelo zinga. Okuthile okungekusha, njengoba besingakwenza kwamanye ama-Mac adlule. Uma ungazi ukuthi kanjani, lapha unesifundo kokuthi ungasishintsha kanjani isilinganiso sokuvuselela ku-16-inch MacBook Pro. Singasuka ku-60 siye ku-47,95 Hz.
Nokho, le mvamisa ye-120 Hz ayisekelwe yizo zonke izinhlelo zokusebenza okwamanje. Eqinisweni, iSafari, ngokwesibonelo, ayikashintshwa. Nokho Ukubuka kuqala kweSafari Technology, inguqulo ye-beta ye-Safari, yebo. Itholakala enguqulweni yakamuva yalesi siphequluli, 135, lapho i-Apple yethule khona ukwesekwa kwe-ProMotion.
Uma uzibuza, ngizokutshela. Cha. Ayikho i-iMac ene-ProMotion. Kodwa kuzoba khona.
Ngeke kube yimi engizokumangaza, kodwa njengoba ungase ucabange, i-Apple Watch ayinaso isikrini se-ProMotion. Isibonisi esihle kakhulu se-retina, yebo. Kodwa ayifinyeleli kumazinga angu-120Hz. Angicabangi ukuthi nami bengiwadinga.
Usuvele wazi okwengeziwe ngalezi zici zamadivayisi akho owathandayo. Kusuka Manje ngiqinisekile ukuthi unaka kakhulu izinga lokuvuselela lapho uyothenga itheminali entsha.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Funda konke okuhlobene nezinga lokuvuselela lamadivayisi akho e-Apple
Uzithumela kanjani izithombe nge-WhatsApp ngaphandle kokulahlekelwa yikhwalithi